महिला क’न्ड’मसँग जोडिएका यी कुरा तपाईंलाई थाहा छ ? – Dailny NpNews
महिला क’न्ड’मसँग जोडिएका यी कुरा तपाईंलाई थाहा छ ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख २९, २०७८ समय: १७:४८:२३
असुरक्षित यौ’न अर्थात अनावश्यक स’मस्या हो । सुरक्षा बिना से’क्स गर्नाले धेरै ग’म्भीर रोगहरू मात्र नभई अनावश्यक ग’र्भा’वस्थामा पनि पुर्‍याउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा पुरुषले मात्र नभई महिलाले पनि सुरक्षित यौ’न सम्बन्धमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ ।
सुरक्षित यौ’न सम्बन्धको उत्तम तरिका भनेको क’न्डम प्रयोग गर्नु हो। व्यक्तिहरू प्रायः सोच्दछन् कि क’न्डम केवल पुरुषहरूको लागि मात्र उपलब्ध छन्, तर हामी तपाईंलाई बताउन चाहन्छौं कि क’न्डम केवल पुरुषहरूको लागि मात्र होईन महिलाका लागि पनि उपलब्ध छन्।
यद्यपि महिला कन्ड’मको कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे धेरै अलमल्लमा छन्स री पुरुषलाई क’न्डमको प्रयोग गर्नु आवश्यक छ, महिलाले पनि क’न्डमको बारेमा सचेत हुनु आवश्यक छ। महिला क’न्डमको प्रत्येक छेउमा नरम रिङ्ग हुन्छन् जसले क’न्डमलाई आफ्नो स्थानमा रहन मद्दत गर्दछ। महिला क’न्डमको सानो र ठूलो औंठी हुन्छ।
क’न्डम राख्नका लागि यो’नी भित्र सानो औंठी घु’साउनुहोस् र ठूलो औंठीले यो’नीको खोल्ने भाग छोप्नुहोस्। यौ’नसम्बन्ध पछि यसलाई हटाउन, ठूलो औंठी समात्नुहोस् र यो’नीबाट क’न्ड’मलाई बाहिर निकाल्नुहोस्।
महिला क’न्ड’मका प्रकारहरू
विश्वभरि, जहाँ पनि एक मात्र प्रकारको पुरुष क’न्ड’म उपलब्ध छ । तर, महिला क’न्ड’मका धेरै प्रकार छन्। का’मदेव क’न्ड’महरू सामान्यतया भारतमा उपलब्ध हुन्छन्, जबकी यो’नि-आकारको क’न्डमहरू पनि धेरै ठाउँमा उपलब्ध छन्, जसलाई अ’ण्डाकार क’न्डम भनिन्छ। यसको आकारको का’रण, यो प्रयोग गर्न सजिलो छ र तपाईंको पा’र्टनरको लागि रमाईलो महसुस प्रदान गर्ने छ ।
प्राकृतिक हा’र्मो’नमा प्रभाव
क’न्ड’मको प्रयोगले प्राकृतिक हा’र्मोनलाई अ’सर गर्छ कि भनेर धेरै महिलाहरू चि’न्तित पनि हुने गर्छन् ।
तर, महिला क’न्ड’मले प्राकृतिक हा’र्मो’नमा कुनै प्रभाव पार्दैन । न कुनै नो’क्सान नै पुर्‍याउँछ । क’न्ड’मलाई ग’र्भ नि’रोधक औषधिभन्दा सुरक्षित मानिन्छ।
दुबै पा’र्टनरले एकै समयमा क’न्ड’म नलगाउनुहोस्
सं’भो’गको बेला, तपाइँ र तपाइँको पा’र्टनरमध्ये एकले मात्रै क’न्डम लगाएको छ भन्ने निश्चित गर्नुहोस्। वास्तवमा, यदि दुबै साझेदारहरूले यौ’न स’म्बन्धको समयमा क’न्डम लगाएमा, त्यहाँ घ’र्षणको का’रण फुट्ने ख’तरा हुन्छ। तसर्थ, दुवै जनाले एकै समयमा क’न्डम लगाउनु हुँदैन ।
महिला कन्ड’मको फाइदा
– जसरी पुरुष क’न्डमले अनावश्यक ग’र्भधारण रोक्दछ, महिला क’न्डमले पनि तपाइँलाई नचाहिने ग’र्भाव
– तपाईंले अनावश्यक समस्या र एच’आ’ईभी जस्ता ग’म्भी’र रो’गहरू रोक्न क’न्डमको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
– केही अध्ययनहरूले पत्ता लगाएका छन् कि पु’रुष क’न्ड’मले तपाईलाई ए’चआ’इभीबाट ८० प्रतिशत ८५ प्रतिशतसम्म सुरक्षित राख्छ । त्यसैमा महिला क’न्ड’मले भने ९० देखि ९५ प्रतिशतसम्म सुरक्षित राख्न सक्छ । यद्यपि, यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं र तपाईंको साथीमध्ये एकले मात्र क’न्ड’म लगाएका छन्।
– यसले यो’नीको भित्री भागलाई यसरी ढाक्छ कि शु’क्रा’णुलाई यो’नीबाट बाहिर राख्छ। महिला क’न्ड’मले शु’क्राणुलाई यो’नीमा प्रवेश गर्नबाट रोक्दछ।